Ewia yii ano kaa sɛ, ‘Wimu abɔde biara ho tumi yɛ den ara yie.’
Naaso anoden mframa anngye asɛm yi annto mu. ‘Wimu abɔde nyinara wɔn ho yɛ den,’ mframa na ɔrekasa yi, ‘naaso me na me ho yɛ den paa wɔ wɔn mu. Yɛnsi akan mfa nkyerɛ sɛ nea me reka no yɛ nokware anaa. Wimu abɔde a ɛbɛma amanfo ɛyi wɔn ntare paa na ne ho yɛ den paa.’
Nsu ne munumkum ne wimu abɔde nyinara bɔɔ wɔn nsamu maa ewi na wɔsoɛɛ no sɛ ɔyɛ hero. Naaso wi kaa kyerɛɛ obiara sɛ ɔnnyɛ hero koraa na wimu abɔde nyinara wɔ ho hia wɔ kwan soronko so. ‘Me nko menntumi nnyɛ wimu abɔde a obiara nnka ho – obiara ne ho hia,’ ewia na ɔrekasa yi. ‘Yɛn mu biara di dwuma a ho hia ara yie, na yɛn nyinara boa ma wimu bere dane. Yɛtɔ nsu go asaase so, yɛ bɔ munumkum wɔ wimu, yɛma nkorɔfo kan ne win, na yɛ bɔ mbɔden sɛ ndua ne nhwiren ne ndɔbae nyin wɔ asaase so.’
Mframa tee ase sɛ obiara yɛ soronko. Ho nnhia sɛ wo bɛdwen sɛ wo ho hia kyɛn obi. Mframa so san tee ase sɛ ho hia sɛ ɔde afoforo bɛbɔ mu edi dwuma sɛnea ɔbɛnya biribi papa efiri afoforo a wɔde no tena wɔn hɔ. Nti ɛbaa no sɛ wimu abɔde nyinara tee wɔn ho ase dii dwuma bɔɔ mu, na obiara yɛɛ n’edwuma, na obiara eni so sɔɔ afoforo wɔn edwuma.